Nhau - Iyo inoshanda yejasmine tii
Iko kushanda kweiyo jasmine tii
Jasmine tii ndeyechinhu chinonhuwirira tii chikamu. Kana uchitarisa jasmine tii, tanga watarisa chimiro, iwo mabhureki ari akakurumbira, uye anogona kazhinji kutariswa seti iri nani ine tii. Wobva watarisa muto kuti uone yayo "nyowani, yemweya, gobvu, uye yakachena".
Iko kushanda uye basa reiyo jasmine tii
1. Kune vakadzi, kunwa jasmine tii hakugone chete kushongedza ganda, kuchenesa ganda, asiwo kuramba kukwegura. Iyo inogona zvakare kudonhedza matumbu emunhu uye mudumbu, yakaderera BP uye ropa lipids, uye zvakare ine simba rakakura mukudzivirira mabhakitiriya nemavirusi.
2. Iyo caffeine iri mujasmine tii inogona kukurudzira iyo yepakati tsinga system, uye kutamba chinzvimbo mukudzora kutsimwaira, kubvisa kuneta, kuwedzera simba, uye kuisa pfungwa kufunga; tii polyphenols, tii pigments uye zvimwe zvinoshandiswa zvine mhedzisiro yekurwisa mabhakitiriya uye hutachiona kudzvinyirira.
3. Jasmine tii ine pungent, inotapira, inotonhorera, inojekesa kupisa, kudzikisira, kunyorova, inozorodza uye inogadzikana mhedzisiro.
4. Jasmine tii haina kungochengetedza inovava, inotapira, uye inotonhorera mhedzisiro yetii, asi zvakare inova inodziya tii nekuda kwenzira yekubheka. Iyo ine dzakasiyana siyana dzekurapa uye hutano mabhenefiti, ayo anogona kubvisa dumbu kusagadzikana, uye kusungunusa iyo tii uye maruva hwema hwekutarisira hutano. .
Post nguva: Aug-18-2021
1 / F, kuvaka 2, Haiying Industrial Park, Junlian Town, Junlian County.